Crucial Iinyaniso Ufuna Ukwazi Malunga Dating a Filipina Wayecinga Catalog
kwi-Persia, encinane lizwe kwi-imilo i phantsi phezulu”Y”Umzantsimpuma e-Asia. Mna besiya Enew York xa ndandisele ishumi elinesine, kwaye desperately balingwe ukufumana ukulingana phakathi wam inkcubeko kunye omtsha unfamiliar inkcubeko Yasentshona. Inxalenye ukuba i-american assimilation iqukiwe dating. Uninzi Filipinas (ibhinqa”Filipino”), ezifana ngokwam, bakholisa ukuba ulinde kude kube zethu emva kwexesha teens okanye phambi kwexesha s ukuqala dating ngenxa yokuba thina anayithathela sele wavusa kunye nenkolo ukuba usapho kwaye zethu uphando kuza kuqala. (Oko kwamnceda ukuba ndiye kwizifundo Zonke i-Girls Catholic High School, ngoko ke kwabakho kakhulu abancinane ekuhendweni.) Kodwa xa mna ekugqibeleni waqala dating wam non-Filipino boyfriend, kwakukho izinto ezimbalwa yena ufuna ukwazi: Omnye yenkcubeko ixabiso ukuba Filipinos ikratshi kwabo ngomhla ngu -“vala usapho ties.”Filipino iintsapho kwaye ngokubanzi ukuthetha, uninzi Asian iintsapho ingaba kakhulu vala. Wonke umntu pitches kwi ukuba ukukhulisa umntwana ukusuka oomawomkhulu ukuba godparents elandelayo-ucango ummelwane. Eneneni, ngokwembali, Filipino courtship ibandakanya the guy ukwenza inkonzo ukuze kubekho inkqubela ke usapho (ithatha amanzi, fixing a alaphukanga kophahla, njalo-njalo.) njengoko yesitalato ubungqina yakho ukuzinike kuye kwaye usapho. Usapho yeyona nto ibaluleke kakhulu kuthi ngamanye amaxesha nangakumbi kubalulekile kuthi kunokuba kuwe. (Uxolo.) Ngoko ke, njengoko Ulwimilanguage Girls uthi: Ukuba ufuna ukuba abe yakhe lover, onalo ukufumana abayo abahlobo kunye nosapho lwakhe. Kwaye zange, ngonaphakade, ngonaphakade isithuko ilungu losapho. Thina Filipinos kanjalo kuba esithi:”Ukuba ufuna ukuba inkundla le kubekho inkqubela, inkundla nomama wakhe.”Trust kum.
Msinyane mna waba mdala ngokwaneleyo ukuba umhla, umama wam wathi kum,”kengoko care yintoni ethnicity ukho, njengoko ixesha elide njengoko yena ke Catholic.”Ngenxa yokuba sibe kwi engqongqo kwaye conservative Roman Catholic lizwe, uninzi Filipinas kuhlangana nawe kusenokwenzeka ukuba uninzi kuqwalasela Catholic iiholide, ingaba esebenzayo kulo ibandla, kwaye wear unqulo paraphernalia emnqamlezweni necklace, umzekelo. Ngexesha elinye, ndiyazi abanye Filipinas abo musa khumbula ukuba zabo ezibalulekileyo ezinye ebaluleke enye inkolo okanye musa ukuchonga kunye wecawe. Kodwa ibe walumkisa ukuba nkqu ukuba babe musa care, usapho lwabo amandlakazi, ngoko ke tread ngenyameko. Nope, lonto nje njani thina kudla. Xa wam cousins kwi-interracial budlelwane nabanye kuzisa zabo ezibalulekileyo abanye bethu ekhaya okokuqala ngqa, abo. kusoloko overwhelmed nge isixa-mali ukutya umama wam lilawula iilwandle ukulungisa kwi-u -umhla ixesha (Ewe, zimbini.
Awunokwazi yokuphepha i-umhleli wencoko yababininame umatshini. A Filipino usapho ebotshiwe ukuba obubobakhe, ubuncinane omnye (ngenxa ezahlukeneyo okkt kuba ezahlukeneyo songs, duh). Ngoko ke, ukuba ufuna ukufumana invited ukuba iqela kwaye wonke umntu ufumana antonio kwaye ecula, ndiza uxolo, kodwa awukwazi yokuphepha i mic.
Siza umkhosi ukuba wavuma
Guys abo wabonisa umdla kwi-dating kum bakubona umngeni xa sukuba ndawufumana ndiza ukugcina ngokwam kuba umtshato. Baye bacinge ukuba unako chu uxinzelelo olukhulu kum kwaye wasiqhekeza kum phantsi, kodwa Filipinas ingaba wavusa ukukholelwa ngesondo lele umntu uceba ukuchitha bubonke ubomi benu kunye. (Zethu Catholic inkolo yenza inxalenye ngaloo, kakhulu.) Kunjalo, abanye Filipinas bakholisa ukuba abe ngaphantsi sexually conservative kunokuba abanye, kodwa kwa ngoko, baye mhlawumbi ikhethe na ukuthetha elubala malunga zabo ngesondo amava
← Persia girls videos
Filipino Dating - Yandisa uze ufake →